Depiote Mapar sy Tim : Manao sorona ny mpianatry ny Oniversite -
AccueilRaharaham-pirenenaDepiote Mapar sy Tim : Manao sorona ny mpianatry ny Oniversite
Miezaka ny mitady hanaovana sorona hatrany ireo milaza ho depiote ho an’ny fanovana, izay ahitana ny avy amin’ny Mapar sy ny Tim. Araka izany, notanterahin’izy ireo omaly ny fandehanana teny amin’ny Oniversiten’Antananarivo eny Ankatso.
Tamin’izany indrindra no namoahany ireo mpianatra efa mianatra teny Ambohitsaina hanara-dia azy ireo, ary hanajanona tanteraka ny fianarana. Notetezin’ireto Depiote mpanakorontana ireto avokoa mantsy ireo departemanta misy mpianatra mianatra rehetra omaly. Nisy tamin’ireo mpianatra no te hanohy ny fianarany, ary nisy kosa ireo tsy te hianatra sy hanohy ny fianarany. Noho izany indrindra, nisy ny fifandonana teo amin’ireo mpianatra ary dia raikitra avy hatrany ny sakoroka teo amin’ny samy mpianatra. Nisy ny tora-bato sy toraka “cocktail Molotov” teo amin’ny samy mpianatra. Izany dia noho ny fampiadiana ataon’ireto Depiote mpanakorontana ireto.
Mazava araka izany fa lian-drà, satria mitady olona maro atao sorona hatrany ireo solombavambahoaka 73 amin’izao fotoana izao mba hiampangana sy hanosoram-potaka indray ny Fitondram-panjakana. Ny fisian’ny rà latsaka no tena katsahin’ireto mpanakorontana manao ramatahora hatraiza hatraiza ireto.
Tsy vitan’ny nitety minisitera nanao ramatahora ireo mpiasa eny anivony fa tonga hatrany amin’ireo sekolim-panjakana ihany koa manao izay fomba rehetra hanerena ny olona hampikatso ny fiainany andavanandro izany.
Voaporofo fa tsy manaja, ary manitsakitsaka lalàna tanteraka ireo depiote ho an’ny fanovana. Tsy voahaja ary ninian’izy ireo tsy najaina intsony ny atao hoe “Faritra tsy azo hidirana”, toa ny teny amin’ny Oniversite, ny fanakorontanana ireo mpiasa sy fidirana am-boletra teny anivon’ireo minisitera isan-tsokajiny, ny fanaovana “ramatahora” miseho lany etsy sy eroa atao amin’ireo mpiasam-panjakana, sns.
Misy lalàna avokoa mifehy ny fanatanterahana hetsika amin’ireo toerana tsy azo aleha sy hidirana ary hifamezivezena ireo. Tsy najaina anefa izany lalàna izany fa dia bontolo sy amboletra fotsiny no nataon’ireto solombavambahoaka ireto.
Izany rehetra izany no midika fa mpanakorontana, ary manitsakitsaka tanteraka ny lalàna velona eto amin’ny firenena izy ireo. Tsy manaja ny zo fototry ny mpiasa sy ny mpianatra ary ny mpiara-belona ireto milaza fa depiote ho an’ny fanovana ireto, amin’ny fomba sy fihetsika ataon’izy ireo isan’andro.
Izany ve no atao hoe tolona lazain’izy ireo ho amin’ny fanovana? Fanapotehana ny firenena sy ny fiainam-bahoaka?